မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): INCREASE WIFI Speed Booster (အများသုံး Wifi ကို ကို့ဖုန်း လိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လိုင်းအား ဆွဲတဲ့ဆော့ဝဲလ်)
အခုတင်ပေးထားတာက Andriod ဖုန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Wifi လိုင်းအား ကို မူလထက် ပို ဆွဲ နိုင်တဲ့ Wifi ဆော့ဝဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ် လဖက်ရည်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ် Wifi လိုင်းလွှင့်ထားရင် ကို့ဖုန်းထဲ သူများထက်ပိုလိုင်းအား ကောင်းအောင် လိုင်းဆွဲပေးပါတယ်။ ကျနော်လက်တွေ့စမ်းသုံးကြည့် တာတော့ တကယ်ကို သိသာလာပါတယ်။
တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။ တောင်းဆိုထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။ Andriod Version 2.3.3 အထက်တွေမှာ အားလုံးအဆင်ပြေ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ထွက် Version ဖြစ်တဲ့ v2.0 ကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့် မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Author ဇော် မင်း သန်း at 6:34:00 PM
Dlaydsaid...
Comment ﻿﻿﻿ရေးရင်﻿photo . ဘယ်﻿လိုထည့်လဲ
မသိလို့ ﻿﻿ပြေ﻿﻿ပေးပါလား အစ်﻿﻿ကို